Geekbench inosimbisa kuti mashandiro eiyo iPhone yako anoenderana nebhatiri | IPhone nhau
Geekbench inosimbisa kuti yako iPhone kuita kuri bhatiri inoenderana
Mazuva mashoma apfuura takakuudza kuti kwaive sei nevashandisi vaishuma kuti yavo "yechinyakare" iPhone yakagadziriswa paichinja bhatiri. Iyo yekuvandudza kune iOS 11 yakanga yakonzera mamodheru akura kupfuura makore maviri kuti akangoerekana ave nezera zvakanyanya uye kunonoka kwaive chinhu chakakurumbira paunenge uchishandisa Zvinoshamisa kuti bhatiri shanduko yakapfava yaivamutsiridza.
Zvingave here kuti bhatiri rakabata iko kuita kwechigadzirwa? Chinhu chakajairwa kana iwe uchigadzirisa uye iyo iPhone inononoka kupfuura nakare ndeyekuti iwe unofunga kuti software haina kunyatsogadziriswa kana kuti processor haichakwanise uye kuti iwe unofanirwa kunge uchifunga nezve shanduko kune imwe yazvino iPhone. Asi zvichibva pakuyedzwa kwevashandisi zvinoita kunge bhatiri ndiro rinokanganisa, zvichingodaro zvakare inoita kunge inosimbiswa mushure mekuyedzwa neGeekbench.
Zvinotaridza kuti zvese zvinotanga kubva paiyo yapfuura vhezheni yeIOS, ine iOS 10, apo vashandisi veiyo iPhone 6 ne6s vakangoerekana vapera iPhone payakangoerekana yadzimwa nebhatiri richiri, kana zvirinani izvo zvakaratidzirwa nemushini pachawo. Apple yakatanga kugadzira zvishandiso nebhatiri rakashatisa zvishoma nezvishoma processor yavo, nechinangwa chekuti kuzvitonga kusaderedzwa, uye kuti matambudziko aya ekumiswa kusingatarisirwe asingaitike. Ndeipi yaive mhinduro kune yakatarwa bhagi yave chinhu, kana saka zvinoita.
Chii chaunoona kana iwe ukaisa yako iPhone mune Yakadzika Simba modhi? Zvakanaka, chimwe chinhu chakafanana chaizvo chingave chinhu chimwe chete icho Apple chinoita pasina kutizivisa patinoona kuti mudziyo une bhatiri rakashatiswa. Ichi chiyero icho munhu wese anogona kunge asingade, asi zvinoita sezvine musoro sekureba Apple ichikuyambira nezvazvo neruzivo, zvichiratidzawo chikonzero chekudzikira uku. Vazhinji vashandisi vachiziva kuti zvaizoshandura bhatiri, zvakachipa pane kushandura iyo iPhone, kana pamwe ndiyo yekupedzisira iyo Apple inoda kuti tiite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Geekbench inosimbisa kuti yako iPhone kuita kuri bhatiri inoenderana
jajajajajajjahahahahahahaha kune piss uye kwete kudonha!
apple yaigara ichiita izvi, maapuro anovandudza anoita ekare zvishandiso kunonoka kutenda mushandisi ari kukwegura kana yechinyakare !!
Iyo yepamutemo Reddit mutengi inovandudzwa ichiwedzera nhamba hombe yezvinhu zvitsva
Simbisa 5 inovandudza mitengo yekushandisa uye haisi nhau dzakanaka